Yohane 10 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Kyerɛwtohɔ 10:1-42
Oguanhwɛfo ne nguammuw no (1-21)
Yesu ne oguanhwɛfo pa no (11-15)
“Mewɔ nguan foforo” (16)
Yudafo no ne Yesu wɔ Asɔrefi-So-Hyira Afahyɛ no ase (22-39)
Yudafo pii annye anni (24-26)
“Me nguan tie me nne” (27)
Ɔba no wɔ Agya no mu (30, 38)
Nnipa a wɔwɔ Yordan agya no pii gyee no dii (40-42)
10 “Nokware, nokware, mereka akyerɛ mo sɛ, obiara a ɔmfa ɔpon ano nkɔ nguammuw no mu, na ɔforo fa baabi foforo no, saa onipa no yɛ ɔkorɔmfo ne obi a ɔfom nneɛma.+ 2 Na nea ɔfa ɔpon ano ba mu no, ɔno ne nguan no hwɛfo.+ 3 Ɔno na ɔpon ano hwɛfo no bue no,+ na nguan no tie ne nne.+ Ɔbobɔ ɔno ara ne nguan din frɛ wɔn, na odi wɔn anim de wɔn pue. 4 Sɛ ɔde ne nguan no nyinaa pue a, odi wɔn anim, na nguan no di n’akyi, efisɛ wonim ne nne. 5 Ɔhɔho de, wɔrenni n’akyi da. Mmom, wobeguan afi ne nkyɛn, efisɛ wonnim ahɔho nne.” 6 Yesu yɛɛ saa ntotoho yi kyerɛɛ wɔn, nanso wɔante asɛm a na ɔreka akyerɛ wɔn no ase. 7 Enti Yesu kae bio sɛ: “Nokware, nokware, mereka akyerɛ mo sɛ, mene nguan no pon no.+ 8 Wɔn a wɔde me din aba nyinaa yɛ awifo ne akorɔmfo werɛmfo; na nguan no antie wɔn. 9 Mene ɔpon no; obiara a ɔfa me so kɔ mu no, wobegye no nkwa, na ɔbɛkɔ mu na waba na wanya adidibea.+ 10 Ɔkorɔmfo remma, gye sɛ ɔrebewia ade, adi awu, na wasɛe ade.+ Me de, maba sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya nkwa, na wɔanya ama aboro so. 11 Mene oguanhwɛfo pa+ no; oguanhwɛfo pa de ne nkwa* to hɔ ma nguan no.+ 12 Ɔpaani a ɔnyɛ oguanhwɛfo, a nguan no nyɛ ne dea no, sɛ ohu sɛ pataku reba a, ogyaw nguan no hɔ guan, na pataku no kyere nguan no, na ɔbɔ wɔn hwete. 13 Nea enti a ɔpaani no guan ne sɛ, paa na wɔabɔ no, enti nguan no ho nhia no. 14 Mene oguanhwɛfo pa no. Minim me nguan, na me nguan nso nim me;+ 15 ɛte sɛ nea Agya no nim me, na me nso minim Agya no+ ara pɛ. Na mede me nkwa* to hɔ ma nguan no.+ 16 “Mewɔ nguan foforo a womfi ban yi mu;+ wɔn nso, ɛsɛ sɛ mede wɔn ba mu. Wobetie me nne, na wɔabɛyɛ kuw baako anya ɔhwɛfo baako.+ 17 Eyi nti na Agya no dɔ me,+ efisɛ mede me nkwa* to hɔ,+ sɛnea ɛbɛyɛ a me nsa bɛka bio. 18 Obiara rennye mfi me nsam, na mmom me ara na mede to hɔ. Mewɔ tumi sɛ mede to hɔ, na mewɔ tumi nso sɛ mesan fa.+ M’Agya na ɔde saa ahyɛde yi maa me.” 19 Asɛm yi nti, Yudafo no mu paapaee+ bio. 20 Wɔn mu pii kae sɛ: “Ɔwɔ honhommɔne, na wabɔ dam. Adɛn nti na mutie no?” 21 Ebinom nso kae sɛ: “Eyi nyɛ nsɛm a efi obi a ɔwɔ honhommɔne hɔ. Mohwɛ a, honhommɔne betumi abue anifuraefo ani ama ayɛ yiye?” 22 Saa bere no, na Asɔrefi-So-Hyira Afahyɛ* no rekɔ so wɔ Yerusalem. Ná ɛyɛ awɔw bere, 23 na na Yesu nenam asɔrefi hɔ wɔ Solomon abrannaa+ no so. 24 Ɛnna Yudafo no kotwaa ne ho hyiae, na wofii ase bisaa no sɛ: “Wobɛma yɛatwɛn* akosi da bɛn? Sɛ wone Kristo no a, ka no pen kyerɛ yɛn.” 25 Yesu buaa wɔn sɛ: “Maka akyerɛ mo, nanso munnye nni. Nnwuma a meyɛ wɔ m’Agya din mu no, ɛno na edi me ho adanse.+ 26 Nanso munnye nni, efisɛ monyɛ me nguan.+ 27 Me nguan tie me nne, na minim wɔn, na wodi m’akyi.+ 28 Mɛma wɔn daa nkwa,+ na wɔrensɛe wɔn da, na obiara renhwim wɔn mfi me nsam.+ 29 Nguan a m’Agya de ama me no som bo sen ade foforo biara, na obiara rentumi nhwim wɔn mfi Agya no nsam.+ 30 Me ne Agya no yɛ baako.”*+ 31 Ɛnna Yudafo no sesaw abo bio sɛ wɔrebɛtotow aboro no. 32 Na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mayɛ nnwuma pa pii a efi Agya no nkyɛn akyerɛ mo. Nnwuma no mu nea ɛwɔ he nti na morebesiw me abo yi?” 33 Yudafo no buaa no sɛ: “Ɛnyɛ adwuma pa bi nti na yɛrebesiw wo abo, na mmom abususɛm a woaka+ ntia; efisɛ woyɛ onipa, nanso woyɛ wo ho onyame.” 34 Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Wɔnkyerɛwee wɔ mo Mmara mu sɛ, ‘Mekae sɛ: “Moyɛ anyame”’?+ 35 Na yenim sɛ wosesa kyerɛwsɛm no a, ɛrenyɛ yiye. Enti sɛ Onyankopɔn frɛɛ wɔn a n’asɛm kasa tiaa wɔn no mpo ‘anyame’+ a, 36 ɛnde me a Agya no atew me ho, na wasoma me aba wiase no, adɛn nti na moka kyerɛ me sɛ, ‘Woka abususɛm’ esiane sɛ mekae sɛ, ‘Meyɛ Onyankopɔn Ba’+ nti? 37 Sɛ menyɛ m’Agya nnwuma a, munnnye me nnni. 38 Na sɛ meyɛ m’Agya nnwuma a, ɛnde, sɛ me na munnye me nni a, munnye nnwuma+ no nni, na moahu, na moakɔ so ahu sɛ Agya no wɔ me mu na me nso mewɔ Agya no mu.”+ 39 Enti wɔsan yɛe sɛ wɔrekyere no, nanso ofii hɔ kɔe a wɔn nsa anka no. 40 Na osiim bio kotwaa Yordan, na ɔkɔɔ baabi a kan no na Yohane bɔ nkurɔfo asu+ no, na ɔtenaa hɔ. 41 Na nnipa bebree baa ne nkyɛn, na wofii ase kae sɛ: “Yohane anyɛ sɛnkyerɛnne baako mpo, nanso nea Yohane ka faa ɔbarima yi ho nyinaa yɛ nokware.”+ 42 Na nnipa pii gyee no dii wɔ hɔ.
^ Anaa “yɛn kra atwɛn.”
^ Anaa “Me ne Agya no adwene yɛ baako.”